Gurmadka doonidii kusoo caariday Xeebta Boosaaso oo meel wanaagsan maraysa (Sawirro). | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Gurmadka doonidii kusoo caariday Xeebta Boosaaso oo meel wanaagsan maraysa (Sawirro).
Gurmadka doonidii kusoo caariday Xeebta Boosaaso oo meel wanaagsan maraysa (Sawirro).
Dekedii macmalka aheyd ee Magaaladda Boosaaso oo laga barbar dhisayey dekeda weyn, ayaa iminka umuuqata mid gabogabo ah, waxaana suurta gashay in la gaaro halka ay kusoo caariday doonida.
Ganacstada Shacabka boosaaso iyo Dowlad goboleedka Puntland, ayaa iska kaashanaya qorshaha la doonayo in lagu badbaadiyo doonida xafiis oo Uraran ganacsato soomaaliyeed, taasi oo sababtay in la hirgeliyo dekedan macmalka ah.
inkastoo ay aad u liidatay rajada laga qabay in la badbaadiyo Hantida saaran doonida 7aad ka hor hadana waxaa muuqata in Qorshaha lagu samatabixinayo hantida saaran doonida xafiis uu gabgabo yahay.
Gurmadkaan oo loo kala harin ayaa maraya halkii ugu dambeeyey Haweenkuna Doorkoodii may gabin oo cuntada iyo cabitaanada ayey samaynayaan ‘ Waxaana gaadiidka dhulka iyo dadkuba iminka ay gaari karaan halka ay taallo doonida Xafiis oo Dekedda boosaaso u dhow.
Wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Puntland oo wasiiradda Amniga iyo Dekeduhu ay ku jiraan ayaana maalmo ka hor boggaadiyey shaqada ka socota xeebta xilli ay kormeer ku tageen goobta laga dhisay dekeda macmalka ah.
In kastoo rajo laga qabay in la dejiyo hantida saaran doonida galabnimadii khamiista hadana badda oo kacsan darteed waxaan dib loogu dhisay maalinimada berito oo jimce ku beegan, Hantida doonida saaran ayaana isugu jirta Gawaari Qalab dhisme iyo bagaash.
Maxamed Muuse Tarsan Sonna Boosaaso.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma oo is casilay..
Next articleMaamulka Degmada Heliwaa oo faah faahin ka bixiyay dab ka kacay Suuqa Xoolaha (Sawirro).